Stanford yekutsvaga Mashandisiro matsva eApple Tarisa Hutano | IPhone nhau
Stanford yekutsvaga Mashandisiro matsva eApple Tarisa Hutano
Stanford University, muUnited States, yakaronga kuvhurwa kwechirongwa chitsva chekutsvaga icho chinosanganisira iyo kuendesa anosvika chiuru zveApple Watch zvishandiso pakati penhengo dzenharaunda yeyunivhesiti.
Chinangwa chechirongwa ichi ndeche tsvaga nzira dzakasiyana dzaungashandise yako Apple Watch kufambira mberi kwehutano hwekuvandudza. Pamusoro pekupa smartwatch yeApple, iyo yunivhesiti inozopa madhora zviuru gumi kubva pagore kubva munaKubvumbi kuenda kuchirongwa chinokunda kuitira kuti chienderere mberi nekutsvagisa kwayo.
1 Iyo Apple Tarisa nekuvandudza hutano
1.1 Chirongwa cheStanford
Iyo Apple Tarisa nekuvandudza hutano
Kambani payakaunza iyo Apple Watch, kumashure munaGunyana 2014, yakapihwa nzira mbiri dzakajeka kuchinhu ichi. Kune rimwe divi, aida kuzviratidza se "fashoni uye yakasarudzika chigadzirwa" Nezve izvo zvaakatanga kuzviisa mumagazini, zvitoro zvepamusoro uye achiperekedzwa nevanhu vane mukurumbira, vachivhura mamodheru akagadzirwa egoridhe uye ane mutengo wakanyanya. Kukundikana kwaive kwakazara, uye kunyangwe isu tisingazive huwandu chaihwo hweyuniti dzakatengeswa, iwo mamodheru haachagadzirwa uye tarisiro yacho yapotsa yanyangarika zvachose.
Kune rumwe rutivi, Iyo Apple Watch yakaunzwawo sechigadzirwa chakanangana nehutano uye chiitiko chemuviri, uye apa ndipo pakabudirira kambani. Zvinotaridza kuti kune vazhinji vashandisi izvi ndizvo zvinonyanya kukosha nezvewachi. Uye zvakare, akasiyana masangano ehutano akaona muApple Tarisa mikana yakakura yekuvandudza hutano kwevarwere uye / kana kutora kutonga kwakanyanya kwemamwe akakosha parameter, pakati pezvimwe zvinhu.
Zvino iri Stanford University pachayo inobatana neiyi nzira kune Apple Watch semudziyo unogona kubatsira kuvandudza hutano kuvanhu. Kuti uite izvi, sangano redzidzo rakatangisa chirongwa chitsva chine chinangwa chekutsvaga mashandisiro matsva eApple Watch inobvumidza ichi chataurwa pamusoro.
Kune izvi, iyo nzvimbo inoda kuzviita tenga uye ugoendesa kune chiuru cheApple Watch pakati pevadzidzi vayo uye fakaroti, uye vape a $ 10.000 yekutsvagisa rubatsiro kune chirongwa chinokunda kuitira kuti, kwegore, iwe ugone kuita yako research.
"Isu tinonyanya kufarira mapurojekiti akakosha anozobatsira vanhu vakasarudzika uye / kana kufambiswa kwemabasa emakiriniki", inogona kuverengerwa pawebhusaiti yeCentro de Salud Dhijitari.
Nguva yekupedzisira yekuendesa kunyorera inogumira kunhengo dzeStanford University fakaroti, uye yatovhurwa kusvika Kukadzi 26. Chidzidzo chose chichagara gore rimwe chete rekarenda uye chichatanga muna Kubvumbi 2017.
Zvinoenderana nemitemo yechirongwa, iyo Apple Watch inofanirwa kuverengerwa muchirongwa chekudzidza chakanangana nekushandiswa kwezviitiko zvekutevera uye / kana zvekutaurirana mabasa kuti uone kuti chishandiso chinogona sei kukonzera shanduko mukutarisirwa kwehutano.a:
Iyo Apple Watch inofanirwa kuve yakabatanidzwa muchirongwa chakajairwa kana dhizaini yekudzidza uko: 1) kugona kwekuona kwewachi (chiitiko, kurova kwemoyo, uye / kana yakachena accelerometer dhata) inoshandiswa kuyera kufambira mberi kwenzvimbo yekupedzisira yakakodzera yechinhu chevanhu. yekudzidza; 2) Iwo ekutaurirana / ekuzivisa maficha e [Apple] Watch anoshandiswa kutyaira maitiro kuchinja / kudzidzisa (vatsvagiri vanofanirwa kushandisa iyo iOS app neWatch app yekuwedzera kana dhizaini yekufambiswa kwebasa uko push notices dzinogona kuendeswa muWatch).
Gore rakapera, mune hurukuro naBloomberg, Apple's CEO Tim Cook akatodzokorora kufarira kwekambani kubatsira mukuvandudza hutanoku. “Chitsvene chewatch chiri kukwanisa kuongorora zvakanyanya uye nezvakawanda zviri kuitika mumuviri wako. Dai iwe uchigona kuve nemudziyo unoziva zvakawanda nezvako, zvaizoshamisa, uye zvaizowedzera hupenyu nekuwedzera hunhu, ”akadaro Cook.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Noticias » Stanford yekutsvaga Mashandisiro matsva eApple Tarisa Hutano
GarageBand 2.2 yeIOS yauya nematoni ezvinhu zvitsva